China yepamusoro mhando XGN15-12 Bhokisi Rudzi Rakagadziriswa AC Simbi Yakavharwa Sulphur Hexafluoride Loop switchgear Fekitori vagadziri uye vanotengesa | Shengte
Wepamusoro Hunhu XGN15-12 Bhokisi Rudzi Rakagadziriswa AC Simbi Yakavharwa Sarufa Hexafluoride Loop switchgear Fekitori
XGN15-12 bhokisi mhando rakamisikidzwa AC simbi yakavharirwa sarufa hexafluoride mhete switchgear (SF6 switchgear) chishandiso chemukati chekuparadzira chine matatu-chikamu chazvino che12Kv uye frequency ye50Hz imwechete bhazi system.
Inoshandiswa zvakanyanya mumafekitori, nzvimbo dzinogarwa, zvivakwa zvepamusoro-soro, grid magetsi grid uye ekupedzisira-mushandisi ekuparadzira nzvimbo, mabhokisi echinjana.
SF6 chinja kabhodhi furemu inoumbwa nekukombama zvakajairwa A3 simbi ndiro (kana yakaputirwa nealuminium-zinc ndiro) mumaprofayiri. Iine chitarisiko chakanaka, yakasimba ngura kuramba uye compact uye inonzwisisika chimiro.
Inogona kuwedzerwa nechero musanganiswa zvinoenderana zvakasiyana dhizaini dhizaini. Inokurumidza uye yakapusa kuunganidza uye nyore kuisa.
SF6 switchgear inogadzirwa uye yakaunganidzwa nenzira yakamisikidzwa inogona kugoverwa mukamuri rebhazi, kamuri rekuchinja, kamuri yekushandisa, imba yemidziyo uye kamuri tambo.
Bhazi hombe rekamuri rebhazi rinogona kuwedzerwa kune chero divi zvisina tsarukano. Inogona kuve nemitatu switchgear kuti iite rin'i network network, kana inogona kuwedzerwa kune chinogonerwa chinomiririra neanopfuura mana switchgear.
SF6 mutoro switch switch yekudyidzana system uye arc yekudzimisa kamuri yakavharirwa mune inodzivirira dhiramu rakadirwa ne epoxy resin APG maitiro, uye izere neSF6 gasi ye0.045 MPa. Nekuda kweayo mashoma ekuisa chisimbiso zvinongedzo, inogona kuchengetedza mweya kubvuza kwenguva yakareba uye kudzivirira kuchengetedza pakupedzisira.
Matatu-chikamu chinofambidzana chinosangana naF .. mutoro switch chinosungirirwa pane yakadzivirirwa spindle, iyo inoziva shanduko yenzvimbo nhatu dzekushanda dzekuvhara, kuvhura uye pasi pasi pechiito chechitubu mashandiro. Icho chinzvimbo chechitatu-chinzvimbo mutoro chinja.
Iyo analog yekutanga dunhu pane mechina mapaneru uye yekuvhura nekuvhara chiratidzo chakanangana neiyo huru shaft yeiyo mutoro switch inogona kuratidza zvakajeka kuvhara, kuvhara kana kumisikidza chinzvimbo chemutoro switch.
Kuti tidzivise kusashanda zvakanaka, mapfundo anogona kuiswa pamaburi anoshanda eiyo mashini.
SF6 gasi kumanikidza geji, webetsero kuonana, rwendo coil, magetsi mashandiro mudziyo, chengetedza wedunhu, yekuyera chiridzwa uye relay dziviriro chishandiso inogona kuiswa maererano nezvinodiwa nemutengi.
SF6 kabhoni inokwanisa kushandira pamwe neCTI chitubu mashandiro pamwe neFLN sarufa hexafluoride mutoro switch (F kabati) kana CTII kaviri chitubu mashandiro pamwe neFLN sarufa hexafluoride mutoro switch-fuse mubatanidzwa mudziyo (FR kabati).
Imba yega yega yekuchinjanisa yakaparadzaniswa neplate yesimbi, uye imwe neimwe kamuri ine zvivakwa zvemwenje. Iyo yepamusoro G ye transformer yakagadzirirwa otomatiki chiutsi dhizaini
Yakasarudzika-matatu-matatu emakona kodhi dhizaini kwete chete inovandudza kusimba uye kuomarara kweiyo furemu pachayo, asi zvakare inovandudza iyo yehunyanzvi kurongeka kweiyo furemu.
Fiyuzi ine impactor, chero chikamu chinokanganisa chiito, chinokonzeresa chinokanganisa chinongedzo mudziyo, mutoro switch switch.
Iyo voltage yekuenzana yakavhara yemabhazi ebazi inogona kugadzira yunifomu yemunda yunifomu uye kudzivirira kukanganisa kwemukati.
Iyo fiyuzi uye waya wekubatanidza magumo ane banga rekusimudza, iro rakabatana nemutoro switch switch.
Iyo yechirimo yekushandisa mashandiro inopindirana neiyo yepamusoro voltage kabhairi kudzivirira iyo yekumberi musuwo kuvhurika kana switch isisina pasi uye kuona kuchengetedzeka kweanoshanda.
Tambo dzakaringana dzinogonawo kugadzirisa mheni dzinosunga, ma transformer azvino, magetsi anoshandura uye zvichingodaro.
Musuwo wepamberi newindo rekucherechedza uye chengetedzo inodzivirira mudziyo, iri nyore uye yakanaka kurodha uye kuburitsa.
Cable chinongedzo chinogona kusunganidzwa zvakananga kune fuse chigaro pasi peiyo fuse, kana kune iyo tini yakafukidzwa mhangura yemhangura pazasi pechigaro chefiyuzi. Mhando mbiri dzetambo dzekubatanidza dzinofambisa kubatana kweimwe-musimboti kana matatu-epakati tambo ine yakapusa yakavharika tambo yemusoro.
Kana paine zvikanganiso zvemukati mubhazi nemakamuri ematafura eT T. switch, inongedzo yakachengeteka yekumanikidza muteresi inotungamira iyo yakanyanya tembiricha uye yakanyanya mweya gasi kunze kwekabhodhi, ichinyatso kuvimbisa kuchengetedzeka kwevanoshanda uye zvimwe zvishandiso.
Makamuri emidziyo akashongedzerwa nefasi-voltage mafiyuzi, michina yekudzivirira inodzosera, uye makadhi emagetsi. Kana imba yacho isina kukwana, bhokisi rechiridzwa rinogona kuwedzerwa pamusoro pekabati.
Cable kiramba ine yakakodzera saizi yekuvhara chisimbiso uye bracket yeiyo cable mukamuri pasi.
AIHWA. Zita Units Numeri Mashoko
1 Rated voltage KV 12 F 、 FR
2 Rated frequency HZ 50 F 、 FR
3 Rated ikozvino A 630 F 、 FR
4 Kunonyanyisa fiyuzi ano A 125 F 、 FR
5 Yakatemerwa pfupi nguva inodzivirira yazvino KA 25 F
6 Rated pfupi pfupi redunhu nguva S 4 F
7 Rated yepamusoro inoshivirira yazvino KA 63 F
8 Rated pfupi redunhu kuvhara ikozvino KA 63 F
9 Rated Anoshanda mutoro kutyora ikozvino A 630 F
10 Yakavharwa-loop kutyora ikozvino A 630 F
11 Yakarongwa Cable Kubhadharisa Razvino A 10 F
12 Main wedunhu kuramba μΩ ≤ 150 F
13 Chinjana chazvino A 1700 FR
14 Rated pfupi redunhu kutyora azvino KA 50 FR
15 Main Circuit Kudzoka Kuramba (Hapana Fuse) Μω 250 FR
16 Daro rimwe chete mm 210 ± 5 F 、 FR
17 Kunonyanyisa simba rekushandisa chinhambwe Kuvhara Nm 8 ~ zana F 、 FR
18 Kunonyanyisa simba rekushandisa chinhambwe Kuvhara Nm 8 ~ zana Basa rekuvhundutsa
19 Rated pfupi-yenguva inomira yazvino yekugadzirisa switch KA 25 F
20 Rated pfupi redunhu nguva yekugadzirisa switch S 3 F
21 Chezita Peak Kushivirira Kwazvino kweGrounding switch KA 63 F
22 1 min yakatarwa ipfupi-temu simba frequency kumira nemagetsi Kupindirana uye hama KV 42 F 、 FR
Isolated kuputsika 48
23 Inoratidzirwa mheni inokurudzira yakasimba voltage Kupindirana uye hama KV 75
Isolated kuputsika 85
24 Mechanical hupenyu Load chinja 次 2000
Kugadzirisa chinja 2000
25 Chikamu chekudzivirira IP3X
Pashure: Yakanakisa KYN28A-12 Indoor Metal Yakashongedzwa Dhonza-kunze switchgear Mutengesi
Zvadaro: Wholesale Mutengo weHXGN-12 AC Yakakwira Voltage switchgear Yakagadziriswa Metal Yakavharwa Loop switchgear-shengte